राष्ट्रिय गजल महोत्सवको तयारी पूरा – DreamLandNepal.com
On: ११ माघ २०७६, शनिबार २२:४९
२०७६ माघ ११ गते । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा संयुक्त रुपमा माघ १५ र १६ गते प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरिने राष्ट्रिय गजल महोत्सवको सबै तयारी पूरा भएको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका काव्य विभाग प्रमुख एवम् महोत्सवका संयोजक प्रा.डा. हेमनाथ पौडेलले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको इतिहासमै पहिलो पटक आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय गजल महोत्सवको सबै तयारी पूरा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “महोत्सवमा सहभागी हुने गजलकार, कार्यपत्र प्रस्तोता, समीक्षक र प्रतिनिधिहरूको छनौट र आवास तथा भोजन व्यवस्थापनका साथै सबै आवश्यक तयारी पूरा भएको छ ।” पौडेलका अनुसार महोत्सवमा सातै प्रदेशबाट पाँच पाँच जना प्रतिनिधि गजलकारका साथै उपत्यकाबाट करिब ४० गरी गरी ७५ जना प्रतिनिधि गजलकारको सहभागिता रहने छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईबाट माघ १५ गते बिहान १० बजे महोत्सवको समुद्घाटन हुनेछ । समुद््घाटन सत्रपछि प्रदेशबाट छानिएर आएका गजलकारहरूको गजल वाचन हुनेछ भने बेलुकी वरिष्ठ गजलकारहरूले गजल सुनाउने छन् ।
महोत्सवको दोस्रो दिन माघ १६ गते पहिलो सत्रमा गजलसम्बन्धी बहस हुनेछ । बहसमा ‘नेपाली गजलः परम्परा र प्रवृत्ति’ शीर्षकमा टीकाराम उदासीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् भने डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’ र घनेन्द्र ओझाले ‘गजल सिद्धान्त र नेपाली गजलमा बहरको प्रयोग’ शीर्षकमा गोष्ठीपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
अर्को सत्रमा ‘आजको गजल लेखनः चुनौती र दिशा’ विषयमा परिसंवाद हुनेछ । त्यसपछि प्रादेशिक गजल लेखनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुति हुनेछ भने साँझ गजल तरन्नम् हुनेछ । तरन्नम्मा नेपालगन्जका प्रसिद्ध गजलगायकका साथमा अग्रज गजलकारहरू सम्मिलित हुनेछन् । सोही साँझ गजलसम्बन्धी महत्वपूर्ण घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय गजल महोत्सवको समापन हुनेछ । महोत्सवको समापन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत् विश्वकर्माबाट हुनेछ ।
उक्त महोत्सवमा उद्घाटनका दिन करिब १२ सय र दोस्रो दिन करिब ३ सय जनाको सहभागिता रहनेछ । महोत्सवका अवसरमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित ‘प्रज्ञा आधुनिक नेपाली गजल’ र ‘प्रज्ञा नेपाली बाल गजल’को लोकार्पणसमेत हुनेछ ।
‘चित्रभित्र लुकेका शब्द’ बाल कविता विमोचित
११ माघ २०७६, शनिबार २२:४९